Man United oo dalab cusub miiska u saartay Barcelona – Gool FM
(Manchester) 21 Juun 2022. Wargeysyada Ingariiska ayaa waxay shaaca ka qaadeen maanta oo Isniin ah, xaaladihii ugu dambeeyay ee ku saabsan wadahadaladii ugu dambeeyay ee labada kooxood Manchester United iyo Barcelona, ee ku aadanaa heshiiska Frenkie de Jong.
De Jong ayaa loo arkaa bar-tilmaameedka koowaad ee Manchester United xagaagan, taasoo ku saleysan rabitaanka tababaraha cusub ee Holland Eric Ten Hag.
Sida laga soo xigtay wargeyska Daily Mail ee dalka England, Manchester United ayaa diyaar u ah inay gaarsiiso dalabkeeda Barcelona ilaa 70 million euros, iyada oo lagu daray 10 million euros.
Qiimaha ay Barcelona ku doonayso inay ku iibiso De Jong ayaa gaaraya 85 million euros, laakiin Manchester United ayaa rajaynaysa in dalabka cusub uu ku filnaan doono heshiiska.
De Jong ayaa hore ugu dhawaaqay inuu ku faraxsan yahay inuu sii joogo Barcelona, ​​laakiin kooxda ayaa wali raadinaysa fursad ay ku iibiso xagaagan, si ay u dhimmaan lacagaha kaga baxa mushaarka, isla markaana ay uga helaan lacago ay ku sameeyaan heshiisyo cusub.
Haddii heshiiska la dhameeyo, De Jong wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu mushaarka badan Manchester United, isagoo qaadan doona 350,000 oo bound, kaddib Cristiano Ronaldo iyo David de Gea.